10 ဥရောပရှိအလှဆုံးဥယျာဉ်များ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > 10 ဥရောပရှိအလှဆုံးဥယျာဉ်များ
ရထားခရီးသွားဘယ်လ်ဂျီယံ, ရထားခရီးသွားချက်သမ္မတနိုင်ငံ, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထားခရီးသွားဟော်လန်, ရထား Travel အီတလီ, ရထားခရီးသွားအဆိုပါနယ်သာလန်, ဥရောပခရီးသွား
စာဖတ်ချိန်:6မိနစ်များ(နောက်ဆုံးတွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 13/11/2020)
ဥရောပသည်နွေ ဦး ရာသီတွင်အလှဆုံးဖြစ်သည်. တောင်ကုန်းများနှင့်လမ်းများသည်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်အရောင်များဖြင့်တောက်ပနေသည်, ထောင့်တိုင်းကိုလှပသောတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှပန်းချီကားများအဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်း. ပြင်သစ်ဥယျာဉ်မှသည်အင်္ဂလိပ်ပန်းဥယျာဉ်များနှင့်အီတလီအိမ်များဥယျာဉ်များအထိဖြစ်သည်, ကမ္ဘာ့အခြားနေရာများထက်ဥယျာဉ်များသည်ဥရောပ၌ရှိသည်. သင်တစ် ဦး နွေ ဦး စီစဉ်သို့မဟုတ် နွေရာသီအားလပ်ရက် ဥရောပမှာဆိုရင်အဲဒီ့ထဲကတစ်ခုကိုသွားကြည့်ရအောင် 10 ဥရောပရှိအလှဆုံးဥယျာဉ်များ.
1. ဗာဆိုင်း, ပြင်သစ်
ရေစမ်း, စိမ်းလန်းသောခမ်းနားထည်ဝါသောမြေများ, ဗာဆိုင်း၏ဥယျာဉ်များကိုကျွန်ုပ်တို့အပေါ်၌ထားပါ 10 ဥရောပရှိအလှဆုံးဥယျာဉ်များ.
800 ဟက်တာမြေများသည်ဗာဆိုင်းဥယျာဉ်ဖြစ်သည်. အကွေ့အကောက်များသောလမ်းကြောင်း, 35 ရေမြောင်းများနှင့်ရုပ်ထုများ၏ကီလိုမီတာ, ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှခရီးသွားများကိုအထင်ကြီးစေပါ. သေချာပါတယ်, ဗာဆိုင်းဟာအလွန်ကောင်းပါတယ် ပဲရစ်မှတစ်ရက်ခရီး, သင်သည်ရောက်လာသောအခါတင့်တယ်ခြင်းအသရေရှိ၏.
Rotterdam မှ Paris Train စျေးနှုန်းများ
2. Keukenhof, နယ်သာလန်
ထက်ပိုပြီး7လှပသော Keukenhof ဥယျာဉ်များ၌နွေရာသီတိုင်း Dutch ည့်သည်များအားဒတ်ခ်ျ Tulips သန်းပေါင်းများစွာကြိုဆိုကြသည်. ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးပန်းဥယျာဉ်သည်itsပြီလနှင့်မေလများတွင်၎င်း၏တံခါးကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်. အဆိုပါ tulips’ blossom သည်နယ်သာလန်နိုင်ငံတွင်အကြီးမားဆုံးအဖြစ်အပျက်တစ်ခုဖြစ်သည်.
အဆိုပါဥယျာဉ် Lisse ၌ရှိကြ၏, Bollenstreek ၏စိတ်နှလုံး၌တည်၏. အမ်စတာဒမ်မှရထားဖြင့်နာရီဝက်သာသွားနိုင်သည်.
3. ဗီလာ D'este ဥယျာဉ်, ရောမအီတလီ
အီတလီရှိ Renaissance ၏ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ဥပမာ, Tivoli ရှိ Ville d'Este ဥယျာဉ်များသည်စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းသည်. ဒီချစ်စရာကောင်းတဲ့ဥယျာဉ်တစ်ခုဖြစ်သည် ယူနက်စကိုကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာများ.
တစ်နှစ်ပတ်လုံးဖွင့်ပါ, ၏ဥယျာဉ် 1000 စမ်းရေတွင်း 30 ရောမမြို့မှကီလိုမီတာ. သင်သတိပြုမိမည့်ထူးခြားသည့်လက္ခဏာတစ်ခုမှာလှပသောဥယျာဉ်ဒီဇိုင်းဖြစ်သည်, နှင့်ဟိုက်ဒရောလစ်ဂီတနှင့်အတူရေစမ်းရေတွင်း.
Tivoli ခုနှစ်တွင်ဗီလာ D'este ဥယျာဉ်သို့ရောက်ရှိရန်?
Florence to Rome ရထားစျေးနှုန်း
ရောမရထားမှ Naples စျေးနှုန်း
4. Isola Bella ဥယျာဉ်, အီတလီ
Isola Bella ဥယျာဉ်များသည် Maggiore ရေကန်အလယ်တွင်ရှိသည်. အီတလီမြောက်ပိုင်းရှိ Borromean ကျွန်းများ, Baroque စတိုင်နန်းတော်နှင့်အီတလီဥယျာဉ်များ၏လှပသောဥပမာဖြစ်ကြသည်.
Borromean ပင်လယ်ကွေ့ရှိရာသီဥတုဒဏ်ကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်, သငျသညျ Isola Bella ဥယျာဉ်တော်၌များစွာသောရှားပါးနှင့်ထူးခြားဆန်းပြားပန်းပွင့်ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်. ဖြည့်စွက်ကာ, ကန်, စမ်းရေ, နှင့်ဖြူဥဒေါင်းများပင်လျှင်သင်၏ခရီးသွားပုံအတွက်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းသောအခြေအနေကိုပြီးမြောက်စေလိမ့်မည်.
မီလန်မှ Isola Bella ဥယျာဉ်သို့ရောက်ရှိရန်?
Isola Bella ဥယျာဉ်များမှာ မီလန်မှအံ့သြဖွယ်နေ့ခရီးစဉ်. သင်တစ်နာရီအတွင်းမီလန်အလယ်ပိုင်းမှရထားနှင့်သွားနိုင်သည် လှေစီး Stresa ကနေ.
Florence to Milan Train စျေးနှုန်း
Florence to Venice Train စျေးနှုန်း
5. Petrin ဟေးလ်, ပရာ့ဂ်
Petrin Hill သည်ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များထံမှလှပသောဆုတ်ခွာခြင်းဖြစ်သည်. ခမ်းနားထည်ဝါစွာအစိမ်းရောင်, သစ်ပင်များ, နှင့်အကွေ့အကောက်များသောလမ်းများပရာ့ဂ်ရဲ့တံတားများနှင့်ရဲတိုက်၏ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာအမြင်များမှသင့်ကိုယူပါ. မမေ့နိုင်သောမြို့တော်ရှုခင်းများအတွက်, ဥယျာဉ်အတွင်းရှိလမ်းများပေါ်ရှိ Petrin Hill မျှော်စင်ကိုသင်သွားသင့်သည်.
Petrin Hill ဥယျာဉ်များသည်ဥရောပရှိအလှဆုံးဥယျာဉ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်. အေးအေးဆေးဆေးအနားယူသည့်နေ့လည်ခင်းတစ်ခုသို့မဟုတ်ညနေခင်းတွင်ရှုခင်းများကိုခံစားကြည့်ရှုနိုင်သည်.
Petrin Hill ဥယျာဉ်သို့သွားရန်?
6. Marqueyssac ဥယျာဉ်, ပြင်သစ်
ဥရောပရှိအထင်ရှားဆုံးဥယျာဉ်များသည်ပြင်သစ်နိုင်ငံရှိ Marqueyssac ၏ဆိုင်းငံ့ထားသောဥယျာဉ်များဖြစ်သည်. Dordogne ချိုင့်ဝှမ်းကိုဆိုင်းငံ့ထားခြင်းသည် Andre le Notre မှလွဲ၍ အခြားအရာများမဟုတ်ပါ, ဗာဆိုင်းဥယျာဉ်၏စီစဉ်.
ဥယျာဉ်များ၏ထူးခြားမှု၏ topiary အနုပညာတည်ရှိသည် 150,000 ဝင်္ကပါကဲ့သို့သောလမ်းကြောင်းများကွန်ယက်တွင်တည်ရှိပြီးလက် - ချုံ့ boxwoods. ဥယျာဉ်များသည် ၁၇ ရာစုရှိဘုရားရှိခိုးကျောင်းများကိုဝန်းရံကာ Dordogne ချိုင့်ဝှမ်းကိုစီးဆင်းစေသည်. အမှန်တကယ်မှော်ခရီးစဉ်သည်, ကြာသပတေးနေ့ညနေခင်းကိုကြိုတင်စီစဉ်ပါ, ဥယျာဉ်ကိုဖယောင်းတိုင်မီးဖြင့်ထွန်းသောအခါ.
ဥယျာဉ်များအကြားတည်ရှိသည် စပျစ်ရည်ဒေသများ ပြင်သစ်မှာ. Marqueyssac ဥယျာဉ်များတစ် ဦး ဖြစ်ကြသည်2နာရီ ရထားစီးနင်း Bordeaux ကနေ.
La Rochelle မှ Nantes ရထားစျေးနှုန်းများ
La Rochelle ရထားစျေးနှုန်းများမှ Toulouse
La Rochelle ရထားစျေးနှုန်းများမှ Bordeaux
La Rochelle မီးရထားစျေးနှုန်းမှပဲရစ်
7. Ludwigsburg နန်းတော်, ဂျာမနီ
ဂျာမန်ဘာသာဖြင့် Bluhenden Barock ဟုလူသိများသည်, အပွင့်အတွက် Baroque ဆိုလိုတာက, Ludwigsburg နန်းတော်ဥယျာဉ်သည်ခမ်းနားထည်ဝါလှ၏. နန်းတော်မြေများကိုအလှဆင်သည့်ဗာဆိုင်းဥယျာဉ်များနှင့်ဆင်တူသည်, ဒီဂျာမန်ဥယျာဉ်ကိုနှင်းဆီပန်း၌ရှိသမျှသောနွေ ဦး ပွင့်, စိမ်းလန်းသောအပင်များ, နှင့် Bonsai သစ်ပင်များနှင့်အတူဂျပန်မှုတ်သွင်းဥယျာဉ်တော်.
အချိုးကျသော Baroque ဥယျာဉ်သည်ပြင်သစ်ပုံစံဖြင့်နန်းတော်ကိုဖြည့်စွက်ရန်ဒီဇိုင်းထုတ်ခဲ့သည်.
ဥယျာဉ်သည်စတုဂတ်အပြင်ဘက်တွင်ရှိသည်, က 30 အားဖြင့်မိနစ်စီး အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး.
Freiburg ရထားစျေးနှုန်းများမှ Offenburg
Stuttgart မှ Freiburg ရထားစျေးနှုန်းများ
Leipzig မှ Freiburg ရထားစျေးနှုန်း
Freiburg ရထားစျေးနှုန်းများမှ Nuremberg
8. Mainau ကျွန်းဥယျာဉ်, ဂျာမနီ
Mainau ပန်းပွင့်ကျွန်းရှိအလှတရားသည်အပွင့်ပွင့်သောအရာတစ်စုံတစ်ခုအမြဲရှိသည်ဟူသောအချက်ဖြစ်သည်. ဤအံ့ဖွယ်ဥယျာဉ်သည် Constance Lake တွင်တည်ရှိသည်. အပူပိုင်းဒေသရာသီဥတုသည်အပူပိုင်းဒေသပန်းများနှင့်အင်္ဂလိပ်ပန်းရောင်ဥယျာဉ်နှစ်ခုလုံးအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်.
ထိုဥယျာဉ်ကိုဖန်တီးခဲ့ပါတယ် 19ကြိမ်မြောက် မင်းသား Nikolaus ဗွန် Esterhazy အားဖြင့်ရာစုနှစ်. ဒီနေ့ 45 ဟက်တာ 'ဥယျာဉ်သည်နွေ ဦး ရာသီဖွင့်လှစ်သောသစ်ခွပြပွဲအတွက်တစ်နှစ်ပတ်လုံး millions ည့်သည်သန်းပေါင်းများစွာကိုကြိုဆိုသည်.
Konstanz ရထားဘူတာမှဘတ်စ်ကားစီး။ သွားနိုင်ပါသည်, ပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာများမှကားကူးတို့, သို့မဟုတ်ကားဖြင့်.
မြူးနစ်မှ Salzburg ရထားစျေးနှုန်းများ
Graz Salzburg ရထားစျေးနှုန်းများ
Salzburg မီးရထားစျေးနှုန်းမှ Linz
9. Sigurta ဥယျာဉ် Verona, အီတလီ
ပန်းခြံ Sigurta ဥယျာဉ် အီတလီပရဒိသုဖြစ်ပါတယ်. ဤသည်အံ့မခန်းဥယျာဉ်ကိုပထမ ဦး ဆုံးလယ်သမား '' villa ပတျဝနျးကငျြသေးငယ်တဲ့ဥယျာဉ်တော်အဖြစ်ဖန်တီးခဲ့သည်. အချိန်နှင့်အတူကယနေ့ဖြစ်ပါတယ်ကျယ်ပြန့်ဥယျာဉ်ကိုတိုးချဲ့ခဲ့သည်. Giardino Sigurta ဥယျာဉ်သည်သန့်ရှင်းရာဌာနဖြစ်သည် 1,500 သစ်ပင်များ, နှင့်တစ် ဦး သန်းပန်းပွင့် 300 တစ်ခုချင်းစီကိုနွေ ဦး ရာသီပွင်ကြောင်းကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများ. နွေရာသီအတွက် 18 ဥယျာဉ်တော်ရေကန်များနှင့်ကန်များသည်ကမ္ဘာတဝှမ်းမှဒေသခံများနှင့်ခရီးသွားများအတွက်ခိုလှုံရာဖြစ်လာသည်.
Parco Giardino Sigurta ကိုဘယ်လိုသွားရမလဲ?
Giardino Sigurta ဥယျာဉ်သည် 8 Garda ရေကန်၏တောင်ဘက်ကီလိုမီတာနှင့် 25 Mantua မှကီလိုမီတာ. Verona ကနေရထားနဲ့သွားနိုင်ပါတယ်, ဘတ်စ်ကားကို Valeggio Sul Mincio သို့သွားပါ.
ရီးမီနာမှ Verona ရထားစျေးနှုန်းများ
ဖလောရင့် Verona စျေးနှုန်း
10. Hallerbos ဥယျာဉ် ဘရပ်ဆဲလ်, ဘယ်လ်ဂျီယံ
တစ်နှစ်တစ်ကြိမ်, Halle အတွက် Hallerbos သစ်တော, တစ် ဦး နတ်သမီးပုံပြင်ကဲ့သို့ဥယျာဉ်တော်သို့အပွင့်. ချစ်စရာကောင်းတဲ့ bluebells မှကျေးဇူးတင်ပါတယ်, Aprilပြီလနှောင်းပိုင်းမှမေလလယ်အထိအစိမ်းရောင်မြေများသည်အပြာရောင်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားသည်.
ထို့အပြင်, Hallerbos ဥယျာဉ်သည်သမင်နှင့်ယုန်တို့၏နေအိမ်ဖြစ်သည်. တစ်နာရီအတွင်းမှာပဲမြို့တော်ကနေရထားစီးပါ, သင်အပြာရောင်သစ်တော၏လှပသောအကွေ့အကောက်များသောလမ်းကြောင်းသို့ခြေလှမ်းနိုင်ပါတယ်. ဒါကြောင့်, သငျသညျနွေ ဦး အတွက်ဘယ်လ်ဂျီယံသွားရောက်လည်ပတ်ရန်စီစဉ်ထားလျှင်, လှပသောတ ဦး တည်းအားဖြင့်ရပ်တန့်ဖို့သတိရပါ ဥရောပတိုက်တွင်သစ်တောများ နှင့်အဝါရောင်လမ်းကြောင်းကိုဆင်းလှည့်လည် - လှည့်လည်ယူပါ.
ဤတွင်မှာ တစ်ဦးကရထား Save, သင်၏အားလပ်ရက်အစီအစဉ်ကိုစီစဉ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီပေးပါမည် 10 ရထားဖြင့်ဥရောပ၌အလှဆုံးဥယျာဉ်.
သင်၏ဘလော့ဂ်ကို“ ဥရောပရှိအလှဆုံးဥယျာဉ် ၁၀ ခု” ကိုသင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်တွင်ထည့်သွင်းချင်ပါသလား? သင်ဟာတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်အယူကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများနှင့်စာပေးပြီးခရက်ဒစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဒီဘလော့ပို့စ်. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/most-beautiful-gardens-europe/- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
သင်သည်သင်၏အသုံးပြုသူများမျိုးဖြစ်လိုလျှင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏ရှာဖွေရေးစာမျက်နှာများသို့တိုက်ရိုက်သူတို့ကိုပဲ့ပြင်နိုင်ပါတယ်. ဒီလင့်ခ်, မင်းတို့ရဲ့လူကြိုက်အများဆုံးရထားလမ်းကိုသင်တွေ့လိမ့်မယ် https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. သငျသညျအင်္ဂလိပ်ဆင်းသက်စာမျက်နှာများတွင်ဘို့ငါတို့လင့်များရှိအတွင်းပိုင်း, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/de_routes_sitemap.xml, သငျတို့သ / ကြောင်းနှင့်ပိုပြီးဘာသာစကားများက de မှ / TR အဆိုပါ / ပြောင်းလဲခြင်းသို့မဟုတ်နိုင်ပါတယ်.
#နွေရာသီ ချစ်သူ ဥရောပသမဂ္ဂ ဥရောပခရီးသွား Frenchgarden နွေဦး ခရီးသွား
အကောင်းဆုံး Wineries ပြီး၊အဲဒီမှာရရန်မည်သို့
ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထား Travel အီတလီ, ရထားခရီးသွားလာဆွစ်ဇာလန်, ဥရောပခရီးသွား